सांसद अपहरण प्रकरणः काठमाडौं प्रहरीले लिन मानेन जाहेरी – हिमालयन ट्रिबुन
काठमाडौं । काठमाडौं प्रहरीले समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अहपरण गरेको सम्बन्धमा जाहेरी दिन पुगेका नेताहरुलाई मुद्दा दर्ता नगरी फिर्ता गरिदिएको छ । प्रहरीले घटनाको सुरुवात महोत्तरीमा भएको हुँदा त्यहीँ जाहेरी दिन भन्दै जोहरी लिन नमानेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यत्रो देशविदेश तरंगित गराइरहेको सांसद अपहरणसम्बन्धी मुद्दा पीडित ब्यक्तिले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाण्डौमा समयभित्र विधिसम्मत ढंगले जाहेरी दिन लाग्दा दर्ता गर्न इन्कार गरिन्छ भने ओलीतन्त्रमा कानूनको शासन कायम हुन्छ र नागरिकको जीवनरक्षा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?’
सांसद यादवलाई अपहरण गरिएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका शीर्ष नेताहरु प्रहरीमा जाहेरी दिन आइतबार दिउँसो प्रहरीकोमा गएका थिए । जाहेरी दिन अपहरणमा परेका भनिएका सांसद यादव, नेता बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताहरु महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुगेका थिए ।
उनीहरुले सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको ’राजनीतिक अपहरण’ गर्नेवरुद्ध किटानी जाहेरी दिन लागेका हुन् । अपहरणमा संलग्न भएको भन्दै पार्टीले पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, नेकपाका नेताहरु महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दिन लागेका हुन् । उनीहरुले जनकपुरबाट सांसद यादवलाई गत साता अपहरण शैलीका काठमाडौं ल्याएका थिए । तर उनीहरुले आफूहरुले सांसद यादवलाई अपहरण नगरिएको बताउँदै आएका छन् ।